မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် လုံးချင်းအရောင်း 41.ရပ်ကွက်. ပေ.40.60.2Rc. 4-master bed 5-Ac ဦးဝိစာရလမျးအနီး စျေး.3600.လျော့တင်းရှိ့ပါတယ် 📞Contact Number 09 699006990 #အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ၊ကွန်ဒို ၊တိုက်ခန်း များ ငှါးရမ်း ရောင်းချ ဝယ်ယူ လိုပါက Shwe Myanmar Property Real Estate သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။